Fanatsarana ny SEO Mit Content: Ideas from Semalt
Lokale SEO tsy mikely aina amin'ny fanatsarana ny tranonkala irery. Izany dia mitazona ny fihazonana ny fahasamihafan'ny fifandraisana amin'ny fiaraha-monina an-tserasera sy ny fiaraha-mientana an-tserasera amin'ny alalan'ny tranonkala sy ny media sosialy. Media Social dia fitaovana tsara indrindra ho an'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mpanjifanao.
Tamin'ny taona 2009, i Google dia nanomboka nampiditra ny Social-Media-Daty tao anatinà sehatry ny organiques search algorithm. Izany dia midika fa ny fampifandraisana ny tranonkala sy ny sehatra media sosialy toy ny Facebook, Twitter ary Instagram dia mitarika ho amin'ny fampiasana bebe kokoa sy ny tranonkala - avene band. Noho izany, ny tranokalanao dia ambony kokoa.
Ho an'ny orinasa lokale dia tokony ho amin'ny toerany ny zava-drehetra, anisan'izany ny faharetana, ny daty sy ny vidiny. Ny Customer Success Manager von Semalt , Frank Abagnale, dia manome anao ireo hevitra izay hanampy anao hanatsara ny tranokalanao sy ny Social Media presence anao mba hahazoana ny fidiram-bola sy ny laharana ambony.
1. Add a Website to Your Blog
Ny bilaogy dia manan-danja amin'ny tranonkala rehetra. Mampiasà izany mba hamoahana ny vaovao farany momba ny vokatra sy ny serivisy, ny mpanjifa ary ny fiaraha-monina. Manolora bilaogy interaktiv, arakaraka ny hevitrao.
Fügen Sie Fotos und Geschichten von Kunden, die Ihr Geschäft haben
Manontany ny mpanjifa araka ny zavatra niainany sy ny toro-hevitra mba hanatsarana ny asany. Danach veröffentlichen Sie die Interviews und Fotos in Ihrem Blog. Ajanòny ny fahazoana alohan'ny hamoahana azy. Mamintina ny tantara amin'ny sehatra sosialy-media platforms ary manorata lahatsoratra amin'ny fandefasana bilaogy. Ny maty dia làlana tsara mba hahazoana ny mpanjifa. Sie werden sich geschätzt fühlen.
Alaharo ny sary amin'ny fotoana fohy ary ambarao azy. Alefaso ireo sary ireo eo amin'ny sehatra sosialy ho an'ny fampahalalam-baovao ary manolora indray ny rohy mankany amin'ny tranonkala. Ampiasao ireo sary mba hanavao ny Google My Business, ny Yahoo Local- ary Bing Places-Photos.
Manomeza anam-bolana iray
Raha toa ka manao izany matetika ianao, dia afaka mitantana ny mpanjifanao amin'ny fotoana farany anao.
Alao sary an-tsaina hoe, ianao dia mpanadio lamba, manorata amin'ny loko marevaka iray izay nanosotra anao. Tantarao ny tantara, toy ity akanjo ity dia marefo ary mihoatra izany. Ny orinasa dia tsy tokony halefa ny "Horrorgeschichte". Mitadiava olona iray ary ampidiro ao amin'ny blôginao izy ary zarao amin'ny media sosialy.
2. Ampifanaraho amin'ny mpiara-belona aminao ny fiarahamonina
Ampiasao ireo sosialy-pejin-tranonkalanao mba hifaneraserana amin'ireo olona manan-daza manana ny lazanao eo amin'ny toerana misy anao. Manolora an-tserasera amin'ny antsipiriany ny lahatsoratra. Ireo tompon'andraikitra isan-karazany dia afaka manampy amin'ny famokarana ny vokatrao sy ny serivisinao. Raha hiteny amin'ny valin-teninao izy, dia mety ho hitan'ny olona sasany ny fanamafisana.
3. Viral Posts manao
Raha mamorona zava-maniry izay miparitaka any amin'ny tambajotra sosialy, dia maro ny olona ao amin'ny orinasa na ny orinasa no hahatsiaro tena. Ny olona dia manomboka mitety ny orinasa, ary ny mpikaroka dia mamaritra azy ho vokatra.
4. Mifandraisa amin'ny fiaraha-monina misy anao amin'ny Internet
Ampiasao ny zava-misy any an-toerana mba hifandraisana amin'ny fianakavianao. Mianara momba ireo zava-nitranga, izay mitranga eo amin'ny manodidina anao amin'ny tambajotra sosialy sy ny bilaogy. Ireo mpankafy dia mety ho azo ampitahaina amin'ireo lahatsoratra izay mahaliana ny olona maro ao amin'ny orinasa / orinasa. Azonao atao koa ny mampiditra ny tranokalan'ny fivoriana misy anao. Ataovy azo antoka fa hovaina ara-potoana izy io.
Hanatsara ny SEO ho SEO mba hahomby, ho an'ny toerana avo kokoa amin'ny sehatra findramana, ary mamorona vaovao vaovao ho an'ny bolongana sy ny sosialin'ny media-hafatra. Ny fampidirana ireo mpanjifa amin'ny tambajotra sosialy dia miteraka fivoarana avo lenta kokoa amin'ny tranokalan-tserasera ary ho raisina ho laharam-pahamehana amin'ny Searchmaschinen.